सावधान ! २०१९ मा यी राशी भएका व्यक्तिले नलिनुहोस् ऋण ! नत्र जीन्दगी नै डुब्ला ऋणै ऋणमा ! – MediaNP
काठमाडौँ । सन् २०१९ को करिब पाँच महिना बित्न लाग्यो । साल परिवर्तन भएसँगै ग्रह पनि परिर्वतन हुने गर्छ । यसरी परिवर्तन भएको ग्रहको असर राशीमा पर्ने गर्छ । त्यस्तै ज्योतिष शास्त्र अनुसार २०१९ मा केही राशी भएका व्यक्तिले आर्थिक कार्यमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको छ । हेरौँ कुन कुन हुन त ती राशीहरु ।
मिथुन : मिथुन राशी भएका व्यक्तिहरुले ऋण प्रयोजनको लागि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । सन् २०१९ मा यो राशी भएका व्यक्तिले सकेसम्म आफ्न्तहरुबा ऋण नलिदा नै राम्रो हुनेछ । तर बैंक तथा अन्य माध्यमबाट भने लिन सकिन्छ ।
सिंह : सिंह राशी भएका व्यक्तिले आर्थिक वष २०१९ भरि ऋण लेनदेन नगर्दा नै उचित हुनेछ । कुनै व्यक्तिबाट व्यवसायको लागि लिएको ऋण खासै फाइदाजनक हुनेछैन् । ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार भएपनि आर्थिक लाभ भने मिल्नेछैन् ।
वृश्चिक : वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिको लागि यो वर्षभरि कसैसँग ऋण लिएर चलाउन उचित छैन् । व्यवसायको लागि आफ्नै पुजी लगानी गरेर चलाउनु फाइदाजनक छैन् । अरुसँग लिएको आर्थिक सयोगले व्यवसाय प्राप्त गर्दा वर्षभरि नै बोझ बन्ने र अन्य समस्या पैदा हुनेछ ।
मकर : सन् २०१९ भरि मकर राशी हुने व्यक्तिले शैक्षिक ऋण बाहेक अन्य ऋण लिन राम्रो हुनेछैन् । यदि यो राशी भएका व्यक्तिले व्यवसायको लागि ऋण लिएको छ भने पनि अन्य कामको लागि खर्च गर्दा राम्रो हुनेछ । यसरी ऋण लिने क्रममा आफु भन्दा पनि परिवारको सदस्यलाई अगाडी बढाउनु राम्रो हुनेछ ।